Ividiyo: Inzululwazi yokuPhembelela | Martech Zone
Ividiyo: Inzululwazi yokuKhokelela
NgoLwesibini, nge-4 kaDisemba ngo-2012 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Enye yeefographics zamva nje esizithumileyo Iindlela ezili-10 zokuguqula iindwendwe ngePsychology. Ukuqonda ukuba yintoni eqhuba umntu ukuba athenge kubalulekile kumthengisi. Ukuba unakho ukubonelela ngolwazi oluyimfuneko, unokuchaphazela isigqibo sokuthenga.
Le vidiyo infographic ivela kubabhali be Ewe !: Iindlela ezi-50 eziQinisekisiweyo zeNzululwazi zokuKholisa isinika ukuqonda kwinto esishukumisela ukuba sithenge. Iindlela ezimfutshane ezimfutshane ezichazwe kwividiyo zezi ukubuyekeza, ukunqaba, Igunya, ngokuvumelana, kuthanda kwaye vu melwano.
tags: IgunyaisivumelwanongokuvumelanaUGqirha Robert Cialdinikuthandaku kholisaukubuyekezaukunqabainzululwazi yokweyiselaSteve Martin
Isindululo seSoftware kukhuthaza ishishini